चुनाव जि’तेको भोलिपल्ट चाडका राष्ट्रपति डेबीको मृ’त्यु ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारचुनाव जि’तेको भोलिपल्ट चाडका राष्ट्रपति डेबीको मृ’त्यु !
चुनाव जि’तेको भोलिपल्ट चाडका राष्ट्रपति डेबीको मृ’त्यु !
काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक चाडका राष्ट्रपति इडरिस डेबीको मृ’त्यु भएको त्यहाँको सेनाले बताएको छ । सेनाका अनुसार गत साताको अन्तिममा मुलुकको उत्तरी क्षेत्रमा भ्रमणको क्रममा अ’चानक वि’द्रो’ही’ले आ’क्र’म’ण गर्दा डेबी घा’इते भएका थिए ।
मंगलबार उनको मृ’त्यु भएको हो ।यसअघि ११ अप्रिलमा भएको निर्वाचनको सोमबार सार्वजनिक भएको निर्वाचनको नतिजाअनुसार डेबी छैटौं कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए ।यससँगै सेनाले सरकार र संसद् विघटन गरेको छ । सेनाको परिषद्ले चाडमा १८ महिना शा’सन चलाउनेछ ।
६८ वर्षीय डेबी चाडमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने नेता थिए । उनी सन् १९९० मा चाडको सत्तामा आएका थिए । डेबी गत साताको अन्तिममा वि’द्रो’ही’सँग ल’डा’इँ चलिरहेको लिबियाको सीमाक्षेत्रको भ्रमणका लागि गएका थिए ।चाडको सै’न्य परिषद्को नेतृत्व दि’वंग’त राष्ट्रपतिका छोरा महमत इ’डरिस डे’बी इ’त्नेले गर्नेछन् ।
उनी आ’र्मीका चारतारे जर्नेल हुन् ।चाडको वि’द्रो’हीले यसअघि निर्वाचनको दिन पनि सीमा क्षेत्रको सै’न्य क्या’म्प’मा आ’क्र’म’ण गरेको थियो । अहिले वि’द्रो’ही राजधानीतर्फ बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।वि’द्रो’हीसँग सेनाले गत शनिबारदेखि ल’डा’इँ सुरु गरेको थियो ।
आ’र्मी’का जनरलले दिएको जानकारीअनुसार यो क्रममा तीन सय छा’पा’मा’र ल’डा’कुहरु मा’रि’ए’का छन् भने १५० ल’डा’कु पक्राउ परेका छन् । अहिलेसम्म पाँच सरकारी सै’निक मा’रि’एको र ३६ जना घा’इ’ते भएको सेनाले बताएको छ । यद्यपि यो तथ्यांकको स्व’तन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन ।